IELTS အကြောင်း WALL STREET ENGLISH ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်သလဲ IELTS စာရင်းသွင်းခြင်း IELTS ပြင်ဆင်ခြင်း အာမခံသောရလဒ်များ
IELTS အကြောင်း (current)
IELTS - ကမ္ဘာနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့
IELTS သည် လူအများကြား ရေပန်းအစားဆုံး နှင့် အယုံကြည်ရဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ များ နှင့် နိုင်ငံအများအပြားက ၎င်းကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံကြပါသည်။ သင် ဒီ နေရာမှာ ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ သင် အလိုရှိတဲ့ IELTS ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိဖို့အတွက် ဒီနေရာဟာ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
IELTS ဆိုတာ ဘာလဲ? ↓
IELTS ဆိုတာ ဘာလဲ?
IELTS ဆိုသည်မှာ "နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအား စမ်းသပ်သော စနစ်" ၏ အတိုကောက် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးနှင့် နေထိုင်မှု ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုတို့ အတွက် ကမ္ဘာ့လူသိအများဆုံးနှင့် ဂုဏ်သတင်း အကျော်ဇောဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စွမ်းရည် စစ်ဆေးမှု ဖြစ်ပါသည်။
IELTS သည် စာဖတ်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စာရေးခြင်း နှင့် အကြားစွမ်းရည် အစရှိသည့် စွမ်းရည် လေးမျိုးစလုံးအား ဆန်းစစ်ပေးပါသည်။ IELTS ၏ နောက်ဆုံး ရမှတ်သည် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ၏ လက်တွေ့ဘဝ
IELTS ရမှတ် ၉ ဆိုတာ ဘာလဲ? ↓
IELTS ရမှတ် ၉ ဆိုတာ ဘာလဲ?
ရမှတ် ၉ ဆိုတာ ဘာလဲ?
အရည်အချင်း (စာဖတ်ခြင်း၊ စကားပြော၊ နားထောင်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း) လေးမျိုးစလုံးအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူသည် သုည (အနည်းဆုံးရမှတ်) မှ ၉ (အများဆုံး ရမှတ်) အတွင်း ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ရမှတ်ပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
စာမေးပွဲကို ပြီးမြောက်အောင် ဖြေဆိုခြင်း မရှိ။
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူသည် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်း မရှိ။
စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူသည္ စကားလံုး အနည္းအက်ဥ္းမွ လြဲျပီး အဂၤလိပ္စကားကို အသံုးျပဳနိုင္စြမ္း မရွိသူ
အင်္ဂလိပ် အရေးနှင့် အဖတ် ကို နားလည်နိုင်ရန် အခက်အခဲ များစွာရှိ၏။
ကန့်သတ်မှု များစွာဖြင့် အသုံးပြုသူ
ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ယေဘုယျ အဓိပ္ပာယ်ကိုသာ နားလည် ကာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဆက်ဆံရေးတွင် ရံဖန် ရံခါ ကမောက်ကထများ ဖြစ်တတ်သည်။
အခြေခံ ကန့်သတ်မှု အရည်အချင်းကြောင့် နားလည်မှုနှင့် ဖော်ပြမှုတွင် ရံဖန်ရံခါ ပြဿနာများ ဖြစ်စေတတ်သည်။
ဘာသာစကားကို အတန်အသင့် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပြီး အခြေအနေတော်တော်များများကို အဓိပ္ပာယ် ခြုံငုံနိုင်စွမ်းရှိ၏။ သို့သော် အမှားအယွင်းများကို ပြုလုပ်တတ်သည်။
မတိကျမှု အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း ဘာသာစကားကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသော အခြေအနေများတွင် ရှုပ်ထွေးသော ဘာသာစကားကို အတန်အသင့် နားလည်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဆိုင်ရာအတွက် ဘာသာရပ်ကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် နားလည်မှုလွဲခြင်း၊ မသင့်တော်သော အသုံးအနှုန်းများနှင့် ရံဖန်ရံခါ မတိကျမှုများ ရှိတတ်သည်။
အလွန် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအတွက် ဘာသာရပ်ကို အပြည့်အဝ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်လေမျှသာလျှင် စနစ်မကျသော မတိကျမှု နှင့် မသင့်လျော်သော အသုံးအနှုန်းများ ရှိတတ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာာစကားကို တိကျ သေချာ ကျွမ်းကျင်စွာ အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ပြီး အပြည့်အဝနားလည်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
IELTS သည် ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲ။ ↓
(*) IELTSTM အရ
သည် ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲ။
IELTS သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တံခါးများကို ဖွင့်နိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ် ရှိသင့်သည့် လက်မှတ်တစ်ဆောင်ဖြစ်သည်မှာ မုချမလွဲ ဧကန်ပင် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ၎င်းမှာ အများနှင့် မတူ ထူးခြားသာလွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
IELTS လက်မှတ် ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၉,၀၀၀ ကျော်မှ လိုအပ်နေပါသည်။
လိုအပ်ချက်များ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။
ပညာရေးအတွက်ပင် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံကူးပြောင်းနေထိုင်မှု အတွက်ပင် ဖြစ်စေ၊ ပညာရှင် ပီသရန်ပင် ဖြစ်စေ အစရှိသည့် ရည် ရွယ် ချက် များအတွက် IELTS ကို ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
IELTS သည် စာမေးပွဲ တစ်ခုချင်းစီအတွက် တင်းကြပ်သော စံနှုန်းများ ချမှတ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သင်ယူလေ့လာသူများ ၏ အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်အဆင့်များ၏ တိကျသော ရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။
သင်ယူလေ့လာသူများ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားများ ခွဲခြားထားပါသည်။
ယေဘုယျ ဆိုင်ရာ IELTS (General IELTS) ၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ IELTS (IELTS Academic ) နှင့် ဘဝအရည်အချင်းများဆိုင်ရာ IELTS (IELTS Life Skills)
မည်သည့် IELTS စာမေးပွဲ အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရမလဲ။ ↓
စာမေးပွဲ အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရမလဲ။
မတူညီသော တစ်ကိုယ်ရည် လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သော IELTS အမျိုးအစား ၃ မျိုး ရှိပါသည်။
ယေဘုယျ ဆိုင်ရာ IELTS
UKVI အတွက် IELTS:
- ယေဘုယျ ဆိုင်ရာ IELTS (General IELTS) တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ မော်ဂျူးနှင့် ယေဘုယျ လေ့ကျင့်ရေး မော်ဂျူးများ ပါဝင်ပါသည်။ (စာမေးပွဲ စစ်ဆေးရာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် မရှိနိုင်ပါ)
- ပညာရေး ဆိုင်ရာ IELTS သည် ဘွဲ့ရရှိလိုသူများ (သို့) ဘွဲ့လွန် တက်ရန် ရည်ရွယ်လိုသူများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ (သို့) အင်္ဂလိပ်စာကို ပြောဆိုသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
- ယေဘုယျဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်း စာမေးပွဲ သည် ဘွဲ့မရသေးသူများ အတွက် စာဆက်လက်လေ့လာလိုသူများ (သို့) အင်္ဂလိပ်စကား ပြောသော နိုင်ငံတစ်ခု တွင် အလုပ်လုပ်လိုသူ (သို့) အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော လေ့ကျင့်ရေးများ ပြုလုပ်သူ (သို့) အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- UKVI အတွက် IELTS သည် UK အစိုးရမှ ထောက်ခံသည့် စိတ်ချယုံကြည်ရသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာမေးပွဲ (SELT) တစ်ခု ဖြစ်သည်။
- UK တွင် ဘွဲ့ ရရှိရန် ကျောင်းတက်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံကို လေ့လာဖို့ လိုအပ်သူများအတွက် အထူးသဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။
- ဘဝအရည်အချင်းများဆိုင်ရာ IELTS (IELTS Life Skills) သည် သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုကို Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) အတွက် သက်သေပြရန် လိုအပ်ပါက အသုံးဝင်ပါသည်။
- ဘဝအရည်အချင်းများဆိုင်ရာ IELTS (IELTS Life Skills) ရမှတ်ကို UK မိသားစု ဗီဇာ (သို့) အခြေပြု နေထိုင်ခြင်း ဆိုင်ရာ လျှောက်ထားခြင်း တို့အတွက် အထောက်အပံ့အနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- အဆင့်များ A1 (မိသားစုအတွက်၊ အိမ်ထောင်ဘက် ဗီဇာ) သို့မဟုတ် B1 (နိုင်ငံသား ခံယူဖို့ ဗီဇာ)
IELTS ပြင်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို ဤ Ebook တွင် ပါဝင်ပါသည်။ အခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။
Ebook ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူပါ။